Argyle လူမှုရေး: ကူးပြောင်းခြင်းခြေရာခံခြင်းနှင့်လူမှုမီဒီယာ | Martech Zone
Argyle Social: ကူးပြောင်းခြင်းလမ်းကြောင်းနှင့်လူမှုမီဒီယာ
သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 14, 2011 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 26, 2011 Douglas Karr
အတော်လေးခဏ, မိတ်ဆွေနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဂျေဆန်ရေတံခွန် မိတ်ဖက်များနှင့်များ၏စွမ်းရည် touting ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Argyle လူမှုရေး. ဂျေးဗာ အဖြစ်ကောင်းစွာတစ် ဦး ပန်ကာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိရိယာအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဖြူရောင်တံဆိပ်တပ်ထားသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာအေဂျင်စီ အလုပ်။ ဒါဟာအဆင်ပြေပလက်ဖောင်းခဲ့ပေမယ့်စျေးနှုန်းအခွံမာသီးဖြစ်ခဲ့သည်။
ဂျေဆန်သည် Argyle တွင်လူများစွာကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးသူတို့သည်စင်မြင့်ကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ငါအတော်လေးသဘောကျခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည် Real-time နှင့်အလွန်အားကောင်းသည့် dashboard တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ လူမှုရေးထုတ်ဝေ, ဖောက်သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် လူမှုရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု…အဖွဲ့သည်စနစ်နှင့်ပြောဆိုမှုများကိုခြေရာခံနိုင်စွမ်းကိုပြသသည့်အခါမေးရိုးကျဆင်းခဲ့သည်။ ဤတွင်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဖြစ်သည် ပြောင်းလဲမှုများနှင့်ဒေါ်လာပမာဏနှင့်အတူသတင်းပို့ (ဒေါ်လာစျေးငွေပမာဏကို setting optional ကိုဖြစ်ပါတယ်) ။
Argyle သည်ဂူဂဲလ် Analytics နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးသင်၏ဂူဂဲလ်အချက်အလက်များနှင့်သင်၏လင့်ခ်များကိုဂူဂဲလ်မှလှုပ်ရှားမှုများအားလည်းစောင့်ကြည့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ Analytics ရှိအသွားအလာအရင်းအမြစ်များကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်လူမှုရေးအသွားအလာများစွာကို 'တိုက်ရိုက်' အသွားအလာအဖြစ်သို့ကူးပြောင်းသွားသောကြောင့်၎င်းသည်အရေးကြီးသည်။ ငါဘယ်လိုအကြောင်းရေးသားခဲ့သည် လူမှုရေးအသွားအလာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ပျောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အသေးစိတ်။
14:2011 pm မှာအောက်တိုဘာ 10, 46
ပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်ဂလပ်! မင်းရဲ့မေးရိုးတွေကျတာကိုဖတ်ရတာဝမ်းသာပါတယ် 🙂
စီအီးအို Argyle လူမှုရေး
14:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 8, 05